Posted by Tranquillus | Sep 28, 2018 | Horumarka shakhsiyeed
Xilka ka qaadis, geerida qof aad jeceshahay, imtixaan la'aan, kala tag jacayl… qof kasta wuu la kulmi karaa tijaabooyinkan nolosha waqti kasta. Intaad kujirto waqti adag, waa caadi inaad murugo dareento. Laakiin markii duufaantu ay baxdo, waa inaan isku daynaa inaan horay u dhaqaaqno. Sidee dib loogu soo celiyaa dhiirigelinta?
Mawqifka saxda ah ee haysta
Waxaan is oran karnaa qofna ma baxsan karo jug culus oo roobka kadib, waxaa jirta cimilo wanaagsan. Markay dhibaatooyin dhacaan, waxaad ogaataa sida ay u adagtahay inaad buurta aado. Way adag tahay, laakiin aan macquul ahayn haddii aad taqaanno sida loo sameeyo!
Dhibaato adag ka dib, inta badan waxaa nagu adkaada dareenno taban, gaar ahaan cabsi. Tani gebi ahaanba waa caadi. Dhinaca kale, su’aal kama taagna in naftiisa loo daayo shucuur xun. Waa inaan daad-gureyno iyaga, xitaa ugaarsano. Sidee loo sameeyaa?
Ugu horreyntii, waa inaad naftaada u oggolaataa inaad la wadaagto xanuunkaaga iyo murugada kuwa hareerahaaga ah. Xanuunkaaga oo aad naftaada u haysato wax badan kaa caawin maayo. Sidoo kale, ogow inaad muujiso shucuurtaada inaysan astaan ​​u ahayn daciifnimo. Taas bedelkeeda, waa tallaabo aad wax u tarta. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad aqbasho xaaladda oo aad u qaadatid dhibaatada adag sidii ay ahayd. Sidoo kale waa habka ugu wanaagsan ee looga fogaado dareemo dambi oo burburin kara niyadda iyo isku-kalsoonaanta.
Iskudhinta ayaa sidoo kale la niyad jabay. Waa inaan sii wadnaa nolol bulsho caadi ah. Waxaa mahad u leh taageerada kuwa kale in qofku heli karo awoodda si looga gudbo dhibaatada. Intaa waxa dheer, go'doonku wuxuu keeni karaa fikrado xun. Marka ay ku soo noqdaan wareega, waxay abuuraan walaac.
READ Ka dib guuldaradii ka dib
Cadaadisku waa cadow loola dagaallamo, maxaa yeelay waxay kaa horjoogsan doontaa inaad dib u hesho dhiirogelintaada. Waa inaan helnaa xeeladaha saxda ah ee lagu maareeyo. Haddii aad ku guulaysato inaad ka gudubto walaaca, waxaad si weyn u wanaajin kartaa tayada noloshaada.
Kobcin fikradaha wanaagsan
Si dib loo helo dhiirigelinta iyo rabitaanka hore u sii socodka, waxaa sidoo kale lagama maarmaan u ah in lagu abuuro fikrado wanaagsan. Si arrintan loo sameeyo, kaliya u samee wax yar oo soo noqnoqod ah si aad u xasuusatid kuwa kale ee hore loo soo celiyay. Waxay ku siin kartaa geesinimo.
Waa maxay hadafka dib u soo nooleynta dhibaatooyinkii hore? Xaqiiqdii, waa tallaabo lama huraan ah oo kaa caawin karta inaad ka gudubto caqabadaha cusub. Ujeeddada ugu weyni waa in la xusuusto waxqabadkaaga iyo waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay. Si kale haddii loo dhigo, waa inaan xafidno xusuusta wanaagsan, taas oo ah inaan dhahno daqiiqadihii aad ku guuleysatay inaad ka adkaato welwelkaagii.
Markaa, iyadoon loo eegin dhibaatada hadda aynu la kulanay inta ay la egtahay, waa in aan nafteena u sheegnaa in aanay ahayn markii ugu horreysay. Haddii aad mar hore u suurtagashay in aad dib u soo kabsato, ma jirto sabab aad wakhtigan u fashilanto. Way fududahay in la helo dhiirigelin.
Raadi macne u lahow khibradaha nolosha
Sidoo kale waa hab wax ku ool ah oo dib loogu soo celiyo dhiirigelintaada ka dib imtixaan adag. Fikradda waa in la arko waxyaabaha iftiinka wanaagsan. Dhab ahaan, muddada adag waa ilo walaac iyo jirro. Laakiin, waxay kaloo kuu keeni kartaa wax.
Xaqiiqdii, tijaabooyinku waxay xoojinayaan awooddaada inaad wajaho dhibaatooyinka. Sababta Way fududahay maxaa yeelay waxay kaaga baahan doonaan inaad abaabusho dhammaan ilahaaga. Waa in la yiraahdaa inta badan waxaan u muuqanaa inaan ilaawno jiritaankooda markii aan indho beelno xanuun iyo rajo beel.
Waxaad ubaahantahay inaad waqti siiso si aad uqiimeyso awoodaada si aad uga faa’iideysato. Shaqada horumarinta shaqsiyadeed ayaa markaa ku jirta barnaamijka. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad adeegsato habka saxda ah ee lagu bartilmaameedsanayo ilahaaga isla markaana aad ogaato inaad haysato waxkasta oo aad ubaahantahay inaad kusoo laabato nolol caadi ah.
Samee hadafyo macquul ah
Xaaladaha oo dhan, waa inaanan ilaawin inaan hada soo marnay dharbaaxo adag oo dhaawacyadiina ay wali dhowyihiin. Waxay ka dhigan tahay inaad wali nugul tahay oo itaal yartahay. Dhibaato kale ayaa kuu dhiman karta. Sidaa darteed, waa inaan ku dadaalnaa taxaddar.
Hadafku waa inuu dib u dhiso wax yar. Looma baahna inaad sameyso boodo weyn kadibna aad hoos ugu dhacdo marka aad la kulanto caqabad. Mid waa inuu sidoo kale ka ilaaliyaa cadaadiska iyo xiisad. Waa inaad naftaada siisid waqti. Go'aanka ugu wayni waa in la dejiyo hadafyo macquul ah oo la gaari karo.
Ogow inaad sharad aad u sarreysa, waxaad toos ugu ordi doontaa dhinaca burburka markabka. Xaqiiqdii, halista ah inaan la gaarin hadafka ayaa ah mid aad u weyn. Si kastaba ha noqotee, waxay kugu qaadanaysaa waxoogaa niyad jab ah ama niyad jab ah inaad ku dhex dhacdo niyad jab dhan. Marka waa inaad naftaada waqti siisaa oo aad tiraahdaa weedho dhiirrigelin ah sida "waad ku guuleysan doontaa cabirkaaga".
Qaadashada hababka la taaban karo
Si loo gaaro ujeeddooyinka loo dejiyay, hababka la taaban karo waa in la soo saaraa. Waa inaad ka fikirto inaad dagaal aadeyso iyo si guul loo gaaro waa inaad heysataa hubka ugu fiican ee jira. Sidaa darteed waa inaan ku bilownaa joojinta caadooyinka xun. Intaa waxaa dheer, waa inaan kordhinaa dadaalkeena.
READ Ka fogaansho la'aanta-Hirgelinta Mawjadaha xunxun
Sidoo kale ogow in dhiirigelinta aan la helin iyada oo aan la isku kalsoonaan karin. Waa inaan aaminsanahay guusha. Intaa waxaa dheer, baro inaad aqoonsato qiimahaaga. Ha ka waaban inaad ku amaanto talaabo kasta oo aad qaadatay. Waa inaad adareesaa guul kasta oo kasta, iyadoon loo eegin sida yar. Ogow inay kaa codsatay shaqo badan iyo geesinimo.
Waa inaan sidoo kale joojino fikirka badan ee mustaqbalka. Waa xaadiraadda xisaabinta. Ugu dambeyntii, sidoo kale ka feker inaad la wadaagto shucuurtaada dadka aad jeceshahay, iyo in ay yihiin wax xun ama wanaagsan. Adigoo sidaas samaynaya, waxaad si tartiib tartiib ah u heli doontaa dhiirigelin.
Gabagabadii, dib u helida niyadaada jug culus kadib waxay ubaahantahay shaqo badan. Kuma dhacayo isha ka mar. Waa inaad waqti siisid naftaada iyo waxkastoo kahoreya, waa inaad horey usocoto waxyar aayar. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in aan la higsan yoolal aad u hami badan. Hadaf yar oo la gaari karo maalin kasta waa ka badan yahay inta ku filan. Barashada aqoonsiga qiimayaashaadu sidoo kale waa muhiim. Intaas waxaa sii dheer, qofku waa inuu aaminsanaadaa kartidiisa qof ee guusha oo uu barto ka faa'iideysiga iyo abaabulka kheyraadkiisa.
Sidee dib loogu soo ceshan karaa dhiirigelintaada kadib xilliga adag? Sebtembar 21st, 2018Tranquillus
horeSidee si dhakhso ah u hagaajineysaa hingaadka dukumintigaaga, helitaanka software antidote.
socdaSida loo abuuro emailkaaga internetka si fudud oo bilaash ah